कसरी सजिलै मुखासे को छुटकारा प्राप्त गर्न?
12-13 वर्ष मा, धेरै जवानहरू छाला संग सम्बन्धित समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ। कारण अनुहार मा हर्मोन को सक्रियता (पनि छाती र कहिलेकाहीं र फिर्ता) गर्न त्यहाँ rashes छन्। अक्सर, जवान मान्छे blackheads उन्मुक्ति कसरी थाहा छैन। टिभीमा विज्ञापन हेर्ने, तिनीहरूले महंगा उपकरणहरू किन्न हतार, तर ती अल्पकालीन परिणाम दिन गर्छन।
कसरी blackheads र pimples को को छुटकारा प्राप्त गर्न?
तपाईं निर्णय भने विशेष हालतमा संग छाला दाना संग लडाई सुरु गर्न, तिनीहरूले लत हो कि सम्झना। यो टनिक, जेल क्लेंसेर वा क्रीम मा निहित पदार्थ, अब छाला मा आवेदन सुरुमा रूपमा प्रभावकारी कार्य गर्न सक्छ भन्ने हो। मुखासे मुखासे को फलस्वरूप फेरि आफूलाई महसुस, र अक्सर तिनीहरूले यो थियो भन्दा पनि ठूलो हुन्छन्। त्यसैले, हरेक 2-3 हप्ता परिवर्तन प्रत्येक वैकल्पिक लागि दुई उत्पादनहरु किन्न राम्रो छ।
तर, यो आवश्यक छैन विज्ञापन उत्पादनहरु मा एक भाग्य खर्च गर्न, त्यसैले छ घर मा मुखासे को छुटकारा प्राप्त गर्न पनि सम्भव छ।
हामी व्यञ्जनहरु कुरा अघि, तपाईं मुखासे बिना छाला को पछि लाग्नुलाई मा मुख्य सर्त समसामयिक अवकास हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान गर्नुपर्छ। तपाईं दिउँसो घर आउन र थप कहीं जाँदै थियो भने, रहनसहन हटाउन निश्चित हुन। साथै, यो जग र राम्रो पाउडर देखि बलियो eruptions र सबै इन्कार कि टिप्पण लायक छ।
तपाईं घर मा र मेकअप बिना सबै दिन खर्च भने, अझै पनि वसामय excretion को अनुहार बाट हटाउने बिना मुखासे pimples को छुटकारा प्राप्त गर्न त कसरी, आवश्यक साँझ छाला शुद्ध, यो असम्भव छ।
मुखासे को लागि एक राम्रो उपाय, एक मास्क साफ छ निम्न घटक मिलेर:
1 चम्मच (चिया), मह;
तेल को 1 ड्रप।
एस्पिरिन, उदाहरणका लागि, सानो चिप्स मा चोट हुनुपर्छ पारंपरिक चम्मच द्वारा। को मह र तेल औसत तरल सानो थोपा थप्न, सबै राम्रो मिश्रण। सफा छाला हुनुपर्छ जनसंचार लागू हुन्छ। विशेष गरी ती स्थानहरू त्यहाँ peeling छ जहाँ मा प्रकाश परिपत्र आन्दोलनहरु बाहिर काम। तर अपरिपक्व मुखासे बचा गर्नुपर्छ - बस तिनीहरूलाई धेरै धारण गर्न आवश्यक छ।
10-15 मिनेट लागि छोड्न, त्यसपछि पानी कुल्ला र वैकल्पिक लागू एक मइस्चराइजर। हरेक7दिन लागू हुन्छ।
कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न नाकमा blackheads: को नुस्खा №2
घरहरू पनि मास्क-फिलिम बनाउन सक्छ। हामीले निम्न घटक आवश्यक हुनेछ:
सक्रिय कार्बन (2 पीसी।);
दूध (1 Tbsp ..);
gelatin (2 चम्मच)।
कोइला दूध थप्न चोट छ। राम्रो मिश्रण। त्यसपछि पोख्नुहोस् आवश्यक रकम gelatin, फेरि homogeneous सम्म भड्काए सुरूवात गर्नुपर्छ। को माइक्रोवेव 10 सेकेन्ड मा राखे।
तपाईं यो मास्क व्यक्ति hover गर्नुपर्छ अगाडि (एक डेजी पानी थप्न)। परिणामस्वरूप उपकरण लागू नाक मा, तर पनि चिउँडो, निधारमा, गाला मा मात्र गर्न सक्दैन। यो एक ब्रश संग गर्नुपर्छ। 15 मिनेट पछि, आम एक फिलिम हुनेछ। किनारा भन्दा स्लिप, तपाईं यसलाई अनुहार बाट हटाउन पर्छ।
त्यसपछि छाला हटाउन कैलेंडुला को tincture संग, र त्यसपछि उज्यालो मइस्चराइजर लागू हुन्छ। हरेक 14 दिनमा लागू हुन्छ।
अब तपाईं blackheads उन्मुक्ति कसरी थाहा छ। सुन्दर हुन!
राजनीतिक विशुद्धता - नियन्त्रण वा शिष्टाचार छ?
कसरी "Yandex नेभिगेटर" मा निर्देशांक प्रविष्ट गर्न? सुविधा र नियमहरू। आधुनिक ब्राउजरमा को कार्य
Trussardi जिन्स: युवा र स्टाइलिश लागि वस्त्र
बिहान पखाला उपचार गर्न भन्दा हरेक दिन?